Ekpere iji mee ka obi dajụọ ma mee ka obi ruo mmadụ ala. ? (Iwe na iwe)
Ekpere ka obi jua gi obi Ọ dị mkpa ebe ọ bụ na anyị amaghị mgbe anyị nwere ike inwe ya.
Ọtụtụ oge anyị na-agagharị ma ọ bụ anyị na ezinụlọ anyị wee hụ ọnọdụ ndị anyị ga-eji mee ka obi jụrụ onye gbanwere ma ọ bụ onye na-agabiga naanị mkpa ime mmụọ ebe ekpere bụ naanị ihe aga-eme iji mesighachi ya obi, n'ihi Nke ahụ bụ mgbe ekpere a ga-adị mkpa.
Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ọ bụ onye bịara abịa, ekpere Ha dị ike nke ukwuu ma enwere ike ịme ya ebe ọ bụla.
Where nọrọ ebe anyị na-ekpe ekpere mgbe niile nwere ike bụrụ naanị ngwa agha anyị nwere ike iji rụọ ọrụ oge ọ bụla.
1 1) Ekpere iji mesighachi onye iwe iwe
2 2) Ekpere iji mesighachi iwe iwe
3 3) Ekpere ka iwepu obi ilu na iwe nke di na nwunye
4 4) Ekpere ime ka obi juputa onye iwe
4.1 Kedụ mgbe m nwere ike ikpe ekpere?
1) Ekpere iji mesighachi onye iwe iwe
“Onye-nwem, nkpuru-obim nālọ miri; nhụjuanya, ụjọ, na ụjọ ejide m.
Ama m na nke a na-eme n becauseihi enweghị okwukwe m, agbahapụ m n’aka aka gị dị nsọ na ịtụkwasịghị ike gị obi kpamkpam infinito. Gbaghara m Onyenweanyi ma mekwuo okwukwe m. Elela nhụjuanya m na ịchọ ọdịmma onwe m anya.
Amaara m na ụjọ na-atụ m, n'ihi na m na-ekwusi ike, n'ihi nhụjuanya m, na-anọgide na-adabere na ndị agha m na-ata ahụhụ, ndị m na-ahụju anya, na usoro m na akụ m. Gbaghara m, Onyenwe anyi, zoputakwa m, Chineke m.
Nyem amara nke okwukwe, Onye-nwe-ayi; Ọ na-enye m amara ịtụkwasị Onyenwe anyị obi na-enweghị atụ, n’eleghị anya n’ihe egwu, mana na-ele naanị Gị, Onyenwe anyị; Nyere m aka, chukwu!
Enwere m mmetụta nke ịbụ onye naanị m na gbahapụrụ, na enweghị onye nwere ike inyere m aka, belụsọ Onyenwe anyị.
Ana m ahapụrụ onwe m n’aka gị, Onye-nwe, n’ime ha ka m na-etinye akụkụ nke ndụ m, ntụzi-aka nke ije m, ma ana m ahapụ nsonazụ n’aka gị. Ekwere m na gị Onyenwe anyị, ma mee ka okwukwe m bawanye.
Amaara m na Onyenwe anyị ahụ ebilitere n'ọnwụ na-ejegharị n'akụkụ m, mana n'otu aka ahụ m na-atụkwa egwu, n'ihi na enweghị m ike ịhapụ onwe m kpamkpam n'aka Gị. Nyere m aka n’adịghị ike m, Onye-nwe.
Ekpere a ka obi dajụọ ma mee ka obi sie mmadụ ike.
N'oge ndị a ọ nwere ike bụrụ ihe a na-ahụkarị ebe ndị mmadụ na-ewe iwe O yiri ka ha na - eche ọnọdụ ọ bụla ka ọ gbaa aghara na oke iwe.
N'ezie anyị ahụwo ọnọdụ ebe enwere ike ịhụ ihe ike dị ka ihe iyi egwu na-emetụta ndụ anyị ma ọ bụ ndị ọzọ gbara anyị gburugburu, ọ bụkwa n'oge ndị ahụ mgbe ekpere na-abụ ebe mgbaba zuru oke ebe enweghi ike iwe.
2) Ekpere iji mesighachi iwe iwe
«Akwa San Miguel
Dike onye-agha nke usu nile nke ndi-agha
Gị onye meriri ihe ọjọọ ọtụtụ oge
You ga-eti ya oge ọ bụla ịchọrọ
Si m ihe ọjọọ
Onye iro ọ bụla nke na-anwa ime ihe ziri ezi
Meekwa ka ndi nile no na ndu m daa
Nye ha udo na udo
Gosi ha ụzọ ha ga-aga
Iwe bụ otu n’ime mmetụta uche nke anyị bụ mmadụ nwere ma sie ike ịchịkwa, ọkachasị n’oge iwe iwe ebe anyị anaghị ajụ maka ihe anyị mere ma ọ bụ ihe anyị kwuru.
Podemos na-ekpughere ndị iwe iwe oge niile na iwe ahụ nwere ike ịgbawa oge ọ bụla, na-enweghị anyị hụrụ ka ọ na-abịa na enweghị ike ịme ihe ọ bụla iji zere ya.
Kaosinadị, mgbe anyị matara ụwa nke mmụọ nke gbara anyị gburugburu, anyị ga-enwe ike ịchị ọnọdụ ndị a site na iwepụta ahịrịokwu. Onye na-ewe iwe nwere ike imetụ ahụ ya n’onwe ya ihe niile na-eme, ọ bụkwa Chineke malitere ịchịkwa omume ya ka iwe wee ghara ịchị ya ọzọ.
3) Ekpere ka iwepu obi ilu na iwe nke di na nwunye
«Ndi mmuo oma, ndi bi n’elu-igwe, ndi di ike na ndi di ike site n’oru aka Chineke
Gi onye ihu ya n’anya, nye kwa ihunanya
A mụrụ ha ka ha rụọ ọrụ ha, ma ruo ugbu a, ha adaghị
Nyere m aka imeri nsogbu a.
Nyere m aka ka ọ ghọta m
Ghọta nsogbu m, ka m ghọta nke gị
Ghọta ihe isi ike m, ịghọta nke gị
Yak enye ayak ọnọ mi onyụn̄ eneme nneme ye ami, man nnọnọ mi ima
Nyere anyi aka imeri ezigbo nsogbu a
Ezigbo ndị mmụọ ozi, unu bụ ìhè m
Nduzi m, na olile anya m
Are bụ m onwe m«
Ekpere a iji dozie nhụjuanya na iwe nke di na nwunye nwere ike iji oge niile na ọnọdụ niile.
Iji maa atụ, mmadụ na-enwe oke ihe mgbu ma ọ bụ nke mmụọ nwere ike daa jụụ mgbe ọ nwetasịrị otu n'ime ekpere ndị a.
Cheta na n’oge nhụjuanya ma ọ bụ mgbe ahụ mmadụ na uche ya na-esogbu onwe ya n’ụzọ pụrụ iche, ekpere bụ ihe anyị nwere ike iji rụọ ọrụ nakwa na anyị maara ka ọ dị irè n’oge niile na ebe niile.
4) Ekpere ime ka obi juputa onye iwe
«Onyenwe m, m na -etinye iwe na obi ilu nke m na -ebukarị n'obi m n'ụkwụ gị, m na -ekpekwa ekpere na n'ime amara gị ka ị kpughere ihe niile na -akpata nsi ilu nke na -abanye n'obi m ọtụtụ oge n'elu, na enwere onwe m. si m na ya
Onye-nwe, ekwuputara m iwe m na obi ilu m niile, amakwaara m na mgbe m kwere ka nke a pụta n’obi m, ọ na-emebi mmekọrịta anyị nwere.
Ama m na mgbe m kwupụtara iwe m, I kwesịrị ntụkwasị obi ma zie ezi ịgbaghara mwepụ iwe dị m n’obi, sachapụkwa m ihe ọjọọ niile, nke m ji eto aha gị.
Ma, Onye-nwe, a chọrọ m ịhapụ m site na mmerụ a n’ime obi m ka mgbọrọgwụ nke iwe wee hapụ anyị n’ime, ma arịọ m gị ka ị nyochaa m ma wepụ ihe niile na-adịghị mma n’anya gị.
Daalụ n'aha Jizọs,
Otutu oge, ubochi ojoo nke ubochi n’abuba na aru na mmuo rue mgbe oge ruru o dika nke gabigara oke na ihe obula na ebua, anyi ewepu aka anyi onwe anyi ma anyi puru ime ihe ojoo.
N’ime oge ndị ahụ, ekpere dị mkpa n’ihi na anyị nwere ike were ha mee ihe n’oge anyị chọrọ ya na n’agbanyeghi onye nọ anyị nso. Ekpere bu ihe eji enyere anyi aka mgbe niile.
Ekpere nwere ike ịme ya mgbe ọ bụla achọrọ.
Enwere ndị na-ewepụtakarị ego pụrụ iche kwa ụbọchị iji kpee ekpere, ma n'ọnọdụ ndị a ebe achọrọ ekpere, enwere ike ịme ha dịka ha bụ naanị ihe anyị nwere ike iji
Anyị nwere ike kpee ekpere n’ime ezinụlọ ma ọ bụ anyị na ndị enyi anyị na-arụ ọrụ, mana ọ dị mma ịnwe obere oge iji kpee ekpere n’ihi na ọ bụ ebe ahụ ka obi anyị meghere n’ihu ọnụnọ nke Onyenwe anyị na anyị nwere ike ịgwa ya okwu.
Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na anyị na-eji kandụl, ọ bụrụ na anyị na-akpọ ụfọdụ egwu dị nro ma ọ bụ nke mmụọ, anyị na-eme ya nwayọ ma ọ bụ daa ụda, ihe dị mkpa bụ ka ekpere ahụ bụrụ nke ezigbo ya, na o sitere na obi anyị nakwa na ejiri okwukwe mee ya. imara na Chineke na-ege anyi nti ma di njikere inabata ihe anyi na aju.
Jiri ike nke Kpee ekpere ka obi juo ma mee ka obi sie gi ike. Soro Chineke nọrọ
Ekpere siri ike maka ndi m ji laghachi
Ekpere siri ike iji m rọrọ nrọ